Lehilahy - Tsarabika
Misy entana 27 isa.
Aseho : 10 20 50 entana isaky ny pejy
+ boky sy kapila CD misy torolalanaMamaha ny olana amin'ny lamosinaManatsara ny fikorinan'ny rà ny fampiasana azy. Ary mampitombo sokatryManatanjaka ny vatana sy ny feHafaingana azo hovahovaina
Ireto ny "sweat homme" tena ilaina amin'izao ririnina izao. Mafana tsara, ary misy satroka na "capuche" ihany koa. Natao ho an'ny lehilahy izy ireto, ary misy amin'ny lokony azo isafidianana tsara, mena fotsy, "bleu marine", misy amin'ny habeny izay ilaina ihany koa S, L, XL.
ireto indray ny "sarouel short". Amin'ny endriny fohy izy ireto, ary tena mety ho an'ireo mpakafia, fanatanjahantena indrindra fa ny dihy. Tena efa mahazo vahany ary efa lamaody be mihitsy itony karazana akanjo itony amin'izao fotoana izao.
Akanjo fitondra mikotrana ho an'ny lehilahy. Na ianao, mpanao fanatanjahantena, na mpakafia, na koa mba mikotrana fotsiny dia tena mety ity akanjo ity. Marika "addidas" miloko "bleu marine".
Pataloa natao ho an'ny lehilahy. Fitondra andavan'andro, na rehefa mandeha manao fanatanjahan-tena. Itony indray no tena lamaody ho an'ny lehilahy amin'izao vanim-potoana izao. Misy loko maro, azo isafidianana, toy ny "gris" sy mainty, na ny mena sy ny mainty.
Sigara elektronika, manampy amin'ny fialana amin'ny sigara mahazatra. Ity sigara elektronika ity dia mandeha amin'y herinaratra efa ao anatiny. Mora hoentina ary mora ampirimina ihany koa, tsy mandoto, ary tsy manepotra toy ny sigara mahazatra.